जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बन्दैँ, देउवा सरकारमा अरु को–को बन्दैँछन् मन्त्री ? (नामसहित) – Ramailo Sandesh
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली युवा नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा सहभागी हुने भएसँगै शर्मा गृहमन्त्री बन्न लागेका हुन् ।
र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ।
देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्ने छन्। माओवादी केन्द्रबाट जनार्दनले गृह मन्त्रालय पाउने भएका छन्।
स्रोतका अनुसार आज माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्रीले सपथ लिने सम्भावना छ । माओवादीबाट पहिलो चरणमा मन्त्री बन्नका लागि जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायतका नेताको नाम अग्रपंक्तिमा छ ।
केपी ओली सरकारमा सहभागी नभएकामध्येबाट आज मन्त्री बनाउनेबारे पार्टीमा छलफल भएको एक नेताले बताए । यी तीनैजना नेता ओली सरकारमा मन्त्री बनेका थिएनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय कांग्रेसले नै राख्ने र मन्त्रीपनि आजै बनाउने तयारी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार संसद पुनः स्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आज ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गरेको थियो।
यता सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ । देउवाले आज प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारी छ ।
कांग्रेसभित्र आजै मन्त्रिपरिषदमा समावेश हुनेमा बालकृष्ण खाँड र डा। मिनेन्द्र रिजालको नाम चर्चामा छ । खाँड अहिले कांग्रेसको मुख्य सचेतक छन् ।
देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा अहिले नेताहरुबीच छलफल भइरहेको छ । कांग्रेस नेताहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सुजाता कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पुष्पा भूषाल लगायतको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा छ । देउवालाई बधाई दिन र मन्त्रीको सम्भावित नामबारे छलफल गर्न महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अहिले बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् ।